DEG DEG: 12kii Kooxood Ee Dhisay European Super League Oo Aan Saxiixin Karin Inay Ka Baxeen Heshiiskaas & Sababta Oo La Shaaciyay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG DEG: 12kii Kooxood Ee Dhisay European Super League Oo Aan Saxiixin Karin Inay Ka Baxeen Heshiiskaas & Sababta Oo La Shaaciyay
DEG DEG: 12kii Kooxood Ee Dhisay European Super League Oo Aan Saxiixin Karin Inay Ka Baxeen Heshiiskaas & Sababta Oo La Shaaciyay
Sida ay goordhow shaacisay warbaahinta Isbaanishka ee Vozpopuli, 12kii kooxood ee ku heshiiyay inay dhistaan horyaalka European Super League ayaa awoodi weysan inay haatan si rasmi ah u saxiixaan inay heshiiskaas ka baxeen.
Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez oo horboodayay qorshahii lagu dhisayay horyaalka European Super League ayaa u muuqda mid ku guuldareystay hamigiisa laakiin wuxuu cunaha ku dhegan yahay 11kii kooxood kale ee kula mideysnaa aragtida dhisataanka European Super League.
Lixda kooxood ee ugu waa weyn Ingariiska ee kala ah Man United, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham oo ay bilow u noqday burburka horyaalka European Super League ka dib markii ay shaaciyeen inay ka baxeen horyaalka, waxaa ku xigay oo iyagana shaaciyay Inter Milan iyo Atletico Madrid halka kooxaha kale ee Juventus, AC Milan, Barcelona iyo Real Madrid ay ka hadleen balse aysan shaacinin inay ka baxeen.
Laakiin midkoodna 12kaas kooxood weli si rasmi ah uma aysan saxiixin inay ka baxeen heshiiskii lagu dhisayay European Super League, sababtoo ah qandaraaskii lagu heshiiyay waxaa ku jiray qodob dhigayay in kooxdii ka baxda horyaalka inay bixin doonto ganaax gaaraya 300 milyan euro.
Inkastoo Florentino Perez lagu cidleeyay European Super League hadana wuxuu ka saxiixay kooxaha inay bixin doonaan ganaax 300 milyan euro ah haddii ay jabiyaan qandaraaska.
Perez ayaa la sheegay inuu markii horeba tuhunsanaa in kooxaha Ingariiska aysan dhab ka aheyn dhistaanka horyaalka cusub.
Horyaalka European Super League waxaa maalgelineysay bankiga Mareykanka ee JP Morgan kuwaasoo amaahinayay kooxahaan lacag kor u dhaafeysa 3 bilyan euro.
Bankiga ayaa goordhow war soo saaray iyagoo u muuqda inay ka baxayaan taageerida horyaalkaan fashilmay ka horba inta uusan bilaabanin.
Afhayeen u hadlay bankiga JP Morgan ayaa yiri: “Sida cad waxaan si qalad ah u aaminay aragtida ay taageerayaasha kubada cagta ka qaadan doonaan horyaalkaan iyo sida ay u saameyn karto mustaqbalka. Cashar ayaan ka baran doonaa arintaan.”